अब कतार जाने यात्रुले सु र्तीजन्य पदार्थ लैजान नपाउने । – Yuwa Aawaj
अब कतार जाने यात्रुले सु र्तीजन्य पदार्थ लैजान नपाउने ।
असार २६, २०७८ शनिबार 149
काठमाडौँ : अब कतार जाने यात्रुले सु’र्तीजन्य पदार्थ लैजान नपाउने भएका छन् । कतार सरकारले अब कतार जाने यात्रुले सु’र्तीजन्य पदार्थ साथमा ल्याउन प्रतिबन्ध लगाएको नेपालमा रहेको कतारी दूतावासले जनाएको छ ।
यसका साथै सु’र्तीजन्य पदार्थ बेच्नका लागि बनाइएका कुनै पनि उपकरण, सु’र्तीजन्य विज्ञापन, प्रचार, स्पोन्सर हुने खालका कुनै पनि सामान पनि लैजान नपाइने कतारी दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
खाडी लगयातको देशमा बन्द गरेको उडान भारतीयलाई चाइ किन दियो अनुमती ?
सरकारले नेपाललाई ‘ट्रान्जिट’ बनाएर विदेश जान नदिने भने पनि भारतीय नागरिकका लागि भने सातामा १० उडान अनुमति दिएको छ। भारतीय दूतावासको आग्रहमा भन्दै साउदी अरेबियाका विभिन्न गन्तव्यमा एकतर्फी यात्रु बोक्ने गरी सातामा १० उडान गर्न अनुमति दिइएको हो।
सातामा नेपाल एयरलाइन्सले ७ र हिमालयन एयरलाइन्सले ३ उडान गर्न अनुमति पाएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतीय दूतावासबाट पत्र आएपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उडान अनुमति दिएको हो।
भारतीय दूतावासले आग्रह गरेकै दिन गत वैशाख २९ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले मागअनुसार उडान अनुमतिका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो। वैशाख ३० गते पर्यटन मन्त्रालयले भारतीय नागरिकलाई रोजगारीका लागि साउदी लैजान अनुमति दिएको हो। मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पत्र पठाउँदै अनुमति कार्या’न्वयन गर्न भनेको थियो।
को’रो’नाको नयाँ भेरिएन्टको जो’खिम बढेको भन्दै अध्यागमन विभागले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर अन्य गन्तव्यमा यात्रा गर्न रोक लगाएको थियो। वैशाख १५ गतेदेखि रोक लगाउने अध्यागमन विभागको निर्णय १५ दिन नबित्दै भारतीय नागरिकका लागि भने खुला गरिएको हो।
साउदीले भारतलाई यात्रा प्रति’ब’न्ध लगाए पनि नेपाललाई भने अझै आवतजावत गर्न अनुमति दिइरहेको छ। यसैको फाइदा उठाउँदै भारतीय नागरिक नेपाल भएर रोजगारीका लागि साउदी जान थालेका हुन्।
स्थल तथा हवाई मार्गबाट भारतीय नागरिक नेपाल प्रवेश गरिरहेको पाइएको छ। सरकारले नेपाल आउने भारतीयले नेपालमा होटल बुक गरेको पाइए स्थलमार्गबाट पनि आउन दिने निर्णय गरेको छ।
नेपाल–भारत एयर बबल सम्झौताअनुसार सातामा २ उडान हुन्छन्। यसअन्तर्गत आफ्ना नागरिक फर्काउन भनिए पनि भारतले एयर बबल सम्झौ’तालाई रोजगारीका लागि साउदी पठाउन प्रयोग गरिरहेको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई उसले ट्रान्जिट बनाएको हो।
साउदी जाने भारतीय नागरिकले यहीँका अस्पतालमा को’रो’ना परीक्षण गर्ने गरेका छन्। यसै क्रममा काठमाडौंको ह्याम्स अस्पतालमा आइतबार उनीहरूको भीड लागेको थियो। त्रिभुवन विमानस्थलबाट साउदी उड्न पी’सी’आर परी’क्षणका लागि ह्याम्स अस्पतालमा लाइन लागेका भारतीय नागरिक।
जहाँ रिपोर्ट लिन पुगेका एक भारतीय नागरिकले मंगलबार आफ्नो उडान रहेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न यात्रुसँग ७२ घण्टाभित्र गरिएको कोरो’ना परी’क्षणको रिपोर्ट चाहिन्छ। भारतीय नागरिकलाई ठूलो संख्यामा आवतजावत गर्न दिँदा नेपालमा कोरोना सं’क्रम’णको जोखिम थप हुनाका साथै साउदीले नेपाललाई पनि यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने खतरा बढेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बताउँछन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष बलबहादुर तामाङ यसले नेपालीको रोजगारीमा समेत असर पर्ने आशंका गर्छन्। भारतीयका कारण नेपालीलाई प्रतिबन्ध लाग्ने र त्यसले त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकलाई अप्ठे’रो पर्न सक्ने उनको भनाइ छ। नेपाललाई प्रतिबन्ध लागे स्वदेश फर्किएका नागरिकले रोजगारी गु|माउने छन्।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेका कारण आफ्नै नागरिक भने संसारका सबै मुलुक जानबाट वञ्चित भइरहेका छन्। श्रम स्वीकृतिसमेत अनलाइनबाट मात्रै जारी भइरहेको छ। अहिले नेपाली श्रमिकलाई चार्टर उडान गरेर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अवस्था नरहेको तामाङले बताए।
सरकारले यही जेठ १७ गतेसम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाएको छ। आन्तरिक उडान अनिश्चित कालका लागि बन्द छन्। चार्टर्ड उ’द्धार उडान हुन सक्ने भनिए पनि सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि कुनै देशमा उडान गरेको छैन।
तत्काल उडान गर्ने योजना पनि नरहेको परराष्ट्र र पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतले भने नेपालबाट जहाज चार्टर गरेर आफ्ना नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइरहेको हो। भारतमा को’रोना’ म’हामा’रीको दोस्रो लहर भयावह भएपछि साउदीले भारतबाट हुने हवाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसैकारण भारतीय नागरिकले साउदी जान नेपाल प्रयोग गर्न थालेका हुन्।
यसअघि नियमित उडानका बेलादेखि नै नेपालीभन्दा बढी भारतीय नागरिक रोजगारीका लागि साउदी गएका छन्। त्यतिबेला पनि सरकारले भारतीय नागरिकलाई एनओसीसमेत नचाहिने व्यवस्था गरेको थियो। सुरुमा एनओसी लिएर गए पनि दूतावासमा भीड लागेपछि रोजगारीमा जाने आफ्ना नागरिकलाई एनओसीबिनै जाने व्यवस्था गर्न भारतीय दूतावासले नेपाललाई भनेको थियो।
आफ्ना नागरिकको भने श’वसमेत विदेशमै रोकिएका छन्। रोजगारी अवधि सकिएका नेपाली पनि फर्किन पाएका छैनन्। मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले स्वदेश फर्किन नपाएर अलपत्र परेको केही नागरिकलाई त्यहाँस्थित नेपालीकै होटलमा बस्ने व्यवस्था गरिएको बताए। उजिर कार्की/नेपाल खबर ड्ट कम
Prevकतारको नयाँ क्वारेन्टाइन मापदण्डबारे जान्नै पर्ने कुरा !
Nextयसकारण आईतवारको खेल अहिले सम्मकै रोचक, कस्ले जित्ला त ?
रवि लामिछानेको ग्यालेक्सी टिभीमा प्रयोग गरिने फोरके प्रविधि के हो ? थाहा पाउनुहोस् !